Jarida Laser ee Dharka Cordura iyo Dharka Sintetikada - Goldenlaser
Goynta Laser ee Dharka Cordura
Xalka Goynta Laser ee Dharka Cordura
Dharka Cordura waa uruurinta dhar-ku-saleysan fiber-ku-dhisan, badiyaa laga sameeyay naylon. Waxaa lagu yaqaanaa iska -caabbinta waxyeellada, ilmada iyo jahawareerka, Cordura waxay u adeegtaa sidii qalab aad u fiican dharka kala duwan, militariga, codsiyada bannaanka iyo badda.
Mashiinka laser-ka wuxuu wuxuu u oggol yahay dharka Cordura iyo agabyada kale ee dardaaranka in si dhakhso leh oo sax ah loo gooyo. Maaddaama aan wax xiriir ah lala sameynin maaddada marka la farsameynayo dharka iyadoo la adeegsanayo leysarka, maaddada waxaa loo farsameyn karaa dhinac kasta iyo iyada oo aan lahayn qaab -dhismeed farsamo, iyadoo aan loo eegin qaab -dhismeedka dharka.
Goldenlaser wuxuu leeyahay waayo -aragnimo ballaaran xagga soo mashiinno laser ah oo la soo saarayiyo khibrad qoto dheer oo ku saabsan codsiyada laser -ka ee warshadaha dharka. Waxaan awood u leenahay inaan bixinno xalal leysarro xirfadeed si loo gaaro goynta laser dharka Cordura.
Hababka Laser ee la adeegsan karo ee Dharka Cordura:
1. Laser goynta Cordura®
Marka laydhku goynayo dharka Cordura, laydhka tamarta sare leh ayaa uumiya walxaha ku yaal waddada la gooyey, taasoo ka tagaysa geesaha bilaa madowga ah, nadiifta ah oo xidhan. Geesaha shaabadaysan ee leysarka ayaa ka hortagaya in marada ay jillaabato.
2. Calaamadeynta laser-ka ee Cordura®
Laser -ku wuxuu awood u leeyahay inuu ku abuuro calaamad muuqata dusha sare ee dharka Cordura oo loo adeegsan karo in lagu dabaqo calaamadaha tolidda inta lagu guda jiro goynta goynta. Calaamadda laser -ka ee lambarka taxanaha ah, dhanka kale, waxay xaqiijineysaa raad -raaca qaybaha dharka.
Faa'iidooyinka mashiinnada dahabka ah ee jarista dharka Cordura:
Dabacsanaanta sare. Awood u leh goynta cabbir kasta iyo qaab kasta, iyo sidoo kale calaamadeynta aqoonsi joogto ah.
Sax sare. Awood u leh inay soo saaraan tafaasiil aad u yar oo kakan.
Goynta Laser-ku wuxuu bixiyaa soo noqnoqosho ka wanaagsan wax soo saarka baaxadda leh.
Laser -gooyayaashu waxay u baahan yihiin shaqaale yaraan iyo waqtiga tababarka oo yaraada.
Kulaylka ka imanaya hannaanka laser -ku wuxuu keenaa cidhifyo nadiif ah oo shaabadaysan oo ka hortaga dillaacidda marada oo kor u qaada rafcaanka guud ee muuqaalka alaabta la dhammeeyey.
Iswaafajinta dhinacyo badan leh. Isla laser -ka madaxa ayaa loo isticmaali karaa dhar kala duwan - naylon, suuf, polyester, iyo polyamide iyo kuwo kale 0 oo leh isbeddello yar oo lagu sameeyay xuduudaheeda.
Habka aan xiriirka lahayn. marada uma baahna in la isku xiro ama lagu dhejiyo miiska goynta.
Macluumaadka maaddada dharka Cordura® iyo habka goynta leysarka
Dharka Cordura waa isku -darka (ama mararka qaarkood isku -darka iyo suufka ku salaysan). Waa maryo qaali ah oo isticmaalkeedu sii fidayo in ka badan 70 sano. Asal ahaan waxaa abuuray DuPont, isticmaalkiisii ​​ugu horreeyay wuxuu ahaa milatariga. Maaddaama Cordura ay tahay maaddada synthetic, waa mid xooggan oo waarta. Waxay leedahay fiilo xoog leh oo xoog leh waxayna u adkeysan doontaa xirashada muddada dheer. Waa mid aad u xoqan oo inta badanna aad u biyo celisa Dharka Cordura ayaa ah mid sii celiya ololka. Dhab ahaantii, cordura waxay ku timaadaa culeysyo dhar iyo qaabab kala duwan iyadoo ku xiran codsiyada iyo mashaariicda qaarkood. Dharka Cordura oo kale oo aad u culus ayaa aad ugu fiican codsiyada warshadaha. Fududeynta qaab -dhismeedka qaabka Cordura ee khafiifka ah wuxuu si fiican ugu shaqeeyaa dhammaan noocyada adeegsiga shaqsiyeed iyo xirfadeed.
Jarida laser-ka badiyaa noqda ikhtiyaar dhaqaale oo dheeraad ah. Isticmaalka laser magaabay wiil si loo jaro dharka Cordura iyo dharka kale ayaa kordhin kara kartida iyo yareynta foosha. Goynta leysarka ayaa sidoo kale horseedaysa diidmada hoose, taas oo guud ahaan hagaajinaysa macaashka shirkadda wax -soo -saarka dharka.
Iyada oo hormuud u ah xalka dalabka laser ee qaybta dharka, Goldenlaser wuxuu leeyahay ku dhawaad ​​20 sano oo waayo -aragnimo ah xagga naqshadeynta iyo horumarinta mashiinno laser ah oo la soo saaray. The Mashiinnada leysarka macmalay by Goldenlaser awood u soo saara xal dawaarle-dhigay iyo natiijada oo tayo sare leh, jarida iyo sixitaanka at heerka ugu sareeya ee xawaaraha, saxnaanta iyo tayada joogto ah.
Dharka Cordura wuxuu u adkaysan karaa nabaad -guurka, ilmada, iyo xoqidda - dhammaan sifooyinka laga filayo maro wax -qabad sare leh. Dharka Cordura waa qayb asaasi ah oo ka mid ah qaar badan oo ka mid ah qalabka wax-qabadka sare ee adduunka ee hormuudka u ah iyo alaabada dharka laga bilaabo:
Jaakadaha mootada iyo surwaalka
Noocyada kala duwan ee Cordura®
- CORDURA® Dharka Ballistic
- Dharka CORDURA® AFT
- CORDURA® Dharka Caadiga ah
- CORDURA® dhogorta dagaalka ™ Dharka
- CORDURA® NYCO Knit Fabric
- Dharka CORDURA® TRUELOCK
Noocyada kale ee Cordura®
- Dharka Polyamide
Waxaan kugula talineynaa mashiinka leysarka CO2 ee goynta dharka Cordura®
CO2 laser laser biraha laga bilaabo 300 watts, 600 watts ilaa 800 watts
Ma jeclaan lahayd inaad hesho ikhtiyaarro dheeraad ah iyo helitaanka nidaamyada dahabka dahabka ah iyo xalka hababka ganacsigaaga? Fadlan buuxi foomka hoose. Khabiiradayada ayaa had iyo jeer ku faraxsan inay ku caawiyaan oo si degdeg ah kuugu soo laaban doona.